English Course – The Well Finisher
Customized Course ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ?
ရှိနှင့်ပြီးသား အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ စာအုပ် တခုခုကို ပုံသေ လက်စွဲထား၍ သင်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ Resource အများကို ကိုးကား စုစည်းပြီး လိုယူ၊ ပိုပယ် ပြုလုပ်၍ စိတ်ကြိုက် သင်ခန်းစာ ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွဲပြားတဲ့ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်း များနဲ့ အနက်ဖွင့်ချက် များကို စုဆောင်း ပုံတူကူး သင်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး လို-တို-ရှင်း ဖြစ်အောင် မလိုအပ်တဲ့ ချဲ့ကားချက်များကို တည်းဖြတ်ပြီး သင်ခန်းစာကို ပြုစုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ အဆင့်ဆင့်ကို အပိုင်းများခွဲခြင်း၊ အခန်းများခွဲခြင်း၊ ပို့ချချက် ဗီဒီယို သင်ခန်းစာများကို ဖန်တီးခြင်း၊ လိုအပ်တဲ့ သင်ကြား‌ခြင်း အထောက်အကူပြု Document/ Material များကို ဖန်တီးခြင်း စတာတွေကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းများကို True/False, Single Choice, Multiple Choice, Essay, Fill In The Blank, Short Answer, Matching, Image Matching, Image Answering, Ordering စသည်ဖြင့် အမျိုးအစား စုံစုံလင်လင် စိတ်တိုင်းကျ ကိုယ်တိုင် ပြုစုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၄ - ၂၀၁၀ အထိ (၆)နှစ်တိုင်တိုင် အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် အချိန်ပြည့် ပညာသင်ကြားခဲ့ခြင်း၊ ၂၀၀၈ မှစ၍ ယခုတိုင် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လက်တွေ့ ရေးသား ပြောဆို သုံးနှုန်းနေရတဲ့ အတွေ့အကြုံ များဖြင့် ဖြည့်စွက် ပေါင်းစပ် သင်ကြားပို့ချ ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းတပုဒ်ကို အလွတ်မရမချင်း အထပ်ထပ် နားထောင်ရသလိုမျိုး မတတ်မချင်း သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သင်တန်း ၁၀ခုကို follow လုပ်ထားရုံနဲ့ မရပါဘူး။ စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတဲ့ သင်ရိုးနဲ့သင်ပါ။
မြို့မှာလား၊ တောမှာလား – ပြသနာမရှိပါဘူး။ သင်ရှိတဲ့နေရာမှာ သင်ခန်းစာတွေက ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံပညာ အထက်တန်းတက်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများ၊ လက်ရှိတက်နေသူများ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်းထွက်လိုက်ရပြီး ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို သီးသန့်သင်ယူလိုသူများ
တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင် အဆင့်မြင့်ဘာသာရပ်များကို တက်ရောက်သင်ယူနေရင်း အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေး မြင့်တင်လိုသူများ
သက်ဆိုရာလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေရင်း အင်္ဂလိပ်စာကို ဖြည့်စွက်သင်ယူလိုသူများ
ဘဝတိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ၊ စကားကို အမှန်တကယ်လိုအပ်ပြီး တတ်မြောက်လိုသူများ
ဒီ (Customized English Course)အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းက လက်တွေ့ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကိုသာ အဓိကထား သင်ပြပေးတာ ဖြစ်ပြီး၊ လက်မှတ်ရဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီသင်တန်းက သင့်ကို –
အင်္ဂလိပ်စာ/စကားဆိုတာ ဘာသာစကားတခု သက်သက်ပါ၊ ဒီထက်ပိုမထူးပါဘူး။ ဥပမာ၊ ကျွန်တော် ဟားခါး(ချင်း)စကားကို နှစ်လနဲ့ အသင့်အသင့် စပြောနိုင်ခဲ့ပြီး တနှစ်လောက် မှာတော့ ဟားခါးတယောက်နဲ့ မခြား ပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၈ တုန်းကပါ)။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထက်တန်းအထိ ၁၀နှစ် တိတိ အင်္ဂလိပ်စာကို သင်ကြရပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ် တခုတိတိပါ။ ဒီလောက်ကာလဟာ ဘာသာ စကားတခု သင်ဖို့ လိုအပ်တာထက်တောင် ပိုပိုသာသာ ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို ဘာသာစကားတခုအဖြစ် သင်ဖို့ – ပြောနိုင် ရေးနိုင်ဖို့ – တနှစ်ဆိုရင် အတော်အတန် လုံလောက်ပြီး အလွန်ဆုံး နှစ်နှစ်ဆိုရင် ရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာကို သာမန်ဘာသာစကားတခုအဖြစ် စိတ်ဝင်စားစရာ သင်ကြားခြင်းကို ကျွန်တော်ဦးဆောင်လမ်းပြ ပါမယ်။ တနှစ်ခန့်မျှ ကျွန်တော်နဲ့အတူ လိုက်ပါပြီး သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရှည်အချင်းကို မြင့်တင်လိုက်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ရှိပါတယ်။ ရက် (၇၀၀) တိတိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ သင်တန်းတခုလုံးကို ပုံမှန်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်အတွင်း ပြီးစီးနိုင်အောင် သင်ခန်းစာများကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက် (၇၀၀) အတွင်း မပြီးနိုင်ပါက သင်ခန်းစာကို ဆက်လက်သင်ယူနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မိမိမပြီးသေးပဲ ကျန်နေတဲ့အပိုင်းကို မဖြစ်မနေ ပြီးတဲ့အထိ သင်ယူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သင်ခန်းစာ တခုလုံးကိုပဲ ပြန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာတိုင်းမှာ မေးခွန်းတို၊ ကွက်လပ်ဖြည့်၊ မှား/မှန်‌ရွေး၊ မေးခွန်းတို/ရှည်၊ အဖြေတိုက် စသည်ဖြင့် အဆင့်အလိုက် အရည်အချင်းစစ်နည်း စုံစုံလင်လင်နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာတိုင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အောင်မှတ်ရှိပြီး ၎င်းအမှတ်ရမှသာ နောက်သင်ခန်းစာကို ဆက်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မရှင်းမလင်း ဝိုးတဝါးနဲ့ သင်ခန်းစာ အဆင့်များကို တက်သွားလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အကြောင်းတခုခုကြောင့် ခွင့်ပြုထားတဲ့ သင်ကြားခွင့်ကာလ အတွင်းမှာ သင်ခန်းစာ တခုလုံးကို ပြီးမြောက်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ဆက်လက် သင်ကြားခွင့် ဆုံးရှုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်မှန်းထားတဲ့ တတ်မြောက်မှု အဆင့်တခု မရသရွေ့ သင်ခန်းစာ တခုချင်းဖြစ်စေ၊ သင်တန်းတခုလုံးဖြစ်စေ ပြီးမြောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
လေ့ကျင့်ခန်းများမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အောင်မှတ် ရှိပါသလား?
Zoom, Facebook, Youtube စတာတွေကနေ Live သင်ခန်းစာ ရှိပါသလား။
မရှိပါဘူး။ သင်ခန်းစာ ပို့ချချက်အားလုံးကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာများနဲ့ သင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ Live လွင့်နေတုန်း မကြားလိုက်တာ၊ မမီလိုက်တာ၊ မမှတ်မိလိုက်တာ ဆိုတာမျိုး လုံးဝမရှိရပါ။ ပို့ချချက်များကို သဘောပေါက်နားလည်ပြီး နားထဲစွဲသွားသည်အထိ အထပ်ထပ် ကြည့်ရှု နားထောင် လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်တန်းဟာ ကိုယ်ပိုင်သင်တန်း ဖြစ်ပြီး မည်သည့် ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့်မျှ ပူး‌ပေါင်း (Affiliate) ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကို ပုံမှန် စာသင်ကျောင်း သင်ခန်းစာများမှ ခွဲထွက်ပြီး Customized လုပ်ထားတဲ့ သင်တန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အခြား ပညာရေး ဆိုင်ရာ ကျောင်းများ၊ ၎ါနများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များ စသည်တို့ အတွက် Credit ရေတွက်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကို လက်တွေ့ အလုပ်ဖြစ် လောက်တဲ့ အတိုင်းအတာ တခုအထိ သင်နားလည်ပြီး၊ ရေးတတ်၊ ပြောတတ်ဖို့ကိုသာ အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာစာနဲ့ ဘွဲ့ရထားသူ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာစာကို ရေးတတ်ကြောင်း၊ ပြောတတ်ကြောင်း ဘယ်ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း ဆီကမှ ဘာလက်မှတ်မှ ရယူပိုင်ဆိုင် ထားခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု သင်ဖတ်နေတဲ့ စာပိုဒ်ကို ကျွန်တော် ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
သင်တန်းတက်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား?